Isku day Inaad Garatid Arintaan Cajiibka Ah Ee Ku Saabsan Caruurtaada. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
August 3, 2013 August 2, 2013 8
Mawhubiddu waa yabooh Alle bixiyo. Daraasaad cusub ayaa sheegtay carruurtu marka ay dhashaan ilaa shan jirkooda mawhibadooda 90% ay tahay. Toddobada jirka marka ay gaadhaan waxay mawhibadoodu noqotaa oo u soo dhaadhacdaa 10%, siddeed jir markay noqdaana waxay gaadhaa 20%.
Qoys kastaa waxa uu jecelyahay ubadka ay dhallaan inay noqdaan kuwo dhinac kasta kaga wanaagsan ubadka dadka kale. Hase yeeshee wax jacaylka iyo wax maamulku waa kala laba. Maamulku waxa uu u baahanyahay garasho cad, arag dhab ah iyo awood shaqo, taasi oo dhalisa kala saarida, xojinta mawhibadaha iyo horseedinteeda.
Arrintan oo aan lagu xidhaynin dib inay u ridaan duruufaha dhaqaale balse loo hawl galo sidii loo ilaalin lahaa, loona kobcin lahaa mawhibadooda. Kelmad dhiiri gelin ama dhoola cadayn daacadnimo xambaarsan ayaa laga yaabaa inay u horseedo inan yar horumar weyn ama guul aan la filayn. Halka laga yaabo, hanti ama waxyaabo kale carruurta jecelyihin la siiyo dib u dhac ama guul darro inay u horseedo.
Intooda badan indheer garadyadii hoggaamiyayaashii wanaagsanaa iyo raggii dunida wax cusub ku soo kordhiyay waxa la isku raacay inay ka dhasheen qoysas sabool ah. Sidaa awgeed waxa waalidiinta looga baahanyahay duruuf kasta oo dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ku suganyihiin. Haddana inay aad ugu dedaalaan, sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen mawhibadda carruurtooda.
Waxa laga yaabaa inuu isweydiiyo akhristuhu ama waalidku sida lagu garankaro ubadka mawhibada ku dhashay iyo ka aan ku dhallan. Runtii calaamado badan oo lagu garto ayuu leeyahay ubadka mawhibadda leh. Tusaale ubadka ama carruurta mawhibadda leh waxa lagu gartaa marka kubaddii uu kuciyaarayay ay ka fuusho kabadhka dushiisa.
Wuxuu doontaa mafiiq dheer iyo kursi uu isku taago. Ka dib wuxuu ku dedaalaa sidii uu dhulka ugu soo tuuri lahaa kubadbdii kabadhka ka fuusahy isaga oo mafiiqda dheer adeegsanaya. Halka ubadka klae marka kubaddu kabadhka ka fuusho uu ooyo.
Waalidiinta waxa looga baahanyahay inay dhiirigeliyaan carruurtooda. Haddii qalad ka dhaco carruurta waxa loo baahanyahay inaan qaladka lagu sheegin iyaga oo lagu sheego wixii uu ku khaldanaa, sidoo kale in la qaldamo laakiin la isa saxo.
Soomaalidu maxay dhulka doogga leh isugu sawirtaa? Weli Su’aashaas Ma Is Weeydiisay Adiguse Dhul Doog ah Ma Isku Sawritay.
KaLaFoGe September 1, 2016 August 31, 2016
DAAWO SAWIRADA MUCJISOYINKA ISKU DHAGAN EE MATAANAHA AH+SAWIRO
KaLaFoGe February 17, 2013
Xaqdarrada Iyo Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Xiliga Laga Guuro Aduunyada.
KaLaFoGe November 26, 2014